ONOWU, IGWE AND LỌỌLỌ in Igboland | Igboniile
Igwe bụ onye isi obodo, na onye nchekwawa omenaala na ọdịnaala n’obodo nke ya n’ala Igbo. N’ala Igbo, obodo ọbụla na-enwe Igwe na-achị achị na ya. O nwere ike bụrụ na o nweghi otu onye a na-asị na ọ bụ ya bụ Igwe ala Igbo niile, nke mere e ji asị “Igbo enwe Eze”, mana obodo ọ bụla na-enwe Igwe (eze) nke ya. Ọ bụrụ na obodo enweghi eze, ọ na-eme ka obodo ndị ọzọ na-eleda ya anya, ọ kacha ma ọ bụrụ na ihe mere obodo ahụ enweghi eze bụrụ site n’enweghi nkwekọrịta n’onwe ha maka onye ga-abụrụ ha eze. Ọ bụ nke a mere obodo ọbụla ji agba mbọ ka ha gbalahụ ịbụ ihe akaje site n’aka obodo ndị ọzọ n’ala Igbo.
Tupu e chie mmadụ Igwe, o nwere ọtụtụ nnyocha a na-eme onye ahụ. Nnyocha ndị ahụ gụnyere:
•	Ma onye ahụ bụkwa ezigbo nwaafọ obodo ahụ. Nke pụtara na onye ahụ aghaghị ịbụ onye obodo ahụ.
•	Onye ahụ ga-abụrịrị ọzọ n’obodo ahụ.
•	Onye ahụ ga-abụrịrị onye nwere ezigbo aha n’obodo. Ọ gaghị abụ onye zurula ohi n’obodo, onye dakporola nwaanyị mmadụ; onye na-eme nsị; onye na-eri akaazụ maọbụ na-akwado ihe ndị a dgz.
•	(N’obodo ụfọdụ n’oge ugbua), onye ahụ aghaghị ịbụ onye gụrụ akwụkwọ.
•	Onye ahụ apụghị ịbụ onye na-arụ ọrụ gọọmet.
•	Onye ahụ aghaghị iru afọ ole obodo ya kwuru na onye ga-abụ igwe ga-eru.
•	Onye ahụ ga-abụ onye nna ya nwụrụla.
•	Onye ahụ aghaghị ịbụ onye isi zuru oke.
N’ezie, e nwere ike nwee ihe ụfọdụ dị iche n’ihe ndị a e depụtara site n’otu obodo ruo n’ọzọ. E nwekwara ike nwee ihe ụfọdụ obodo nwere ike ịgbakwụnye na ndị a, mana ihe a chọrọ n’aka onye ga-abụ igwe aghaghị ịbụ ihe yitere ihe ndị a.
Oge e mechaala nnyocha, a ga-agụrụ onye ahụ ihe bụ nsọ onye ga-abụ Igwe dịka:
•	Igwe agaghị aga ebe a na-akwa ozu naanị ya na n’onwe ya.
•	Igwe agaghị aga ahịa obodo n’onwe ya.
•	Igwe agaghị azọ ọchịchị ọbụla.
•	Igwe agaghị eri nri n’ọha.
•	Igwe agaghị na-arụ ọrụ ego maọbụ na-azụ ahịa maọbụ na-atụ mgbere (business).
Ọ bụrụ na ihe niile agachaa etu e si chee, ụbọchị a ga-echi igwe, mmadụ niile ga-agbakọ n’ụlọ ezumezu obodo ahụ (Town Hall), ebe onye a ga-echi Igwe ga-ebinye aka n’akwụkwọ iji gosi nnabata, ma ọ bụrụ na o kwere n’ihe e kwuru.
Ụbọchị a ga-echi Igwe, a ga-esi ụdị ihe oriri dị iche iche, nute ụdị mmanya dị iche iche. Ụdị egwu dị iche iche ga-agbakwa. Obodo niile ga-agbakọ, tinyere ndị abụghị ndị obodo ahụ e ziri ka ha bịa, (na ndị e zighi). Ọ bụrụ na e mechaa emume ichi igwe, nke ọ bụ Onowu nke Igwe nke nwụrụla anwụ ga-echi onye ahụ, Igwe ahụ e chiri ọhụrụ na ndị niile e chiri echichi nọ ebe ahụ ga-agba egwu ufie.
Tup a gbasaa, igwe gwachaa ọhanaeze okwu, ọ ga-ahọpụta Onowu nke ya, onye nke ga-esi na zone maọbụ ọnụkụ dị iche site na nke Igwe ahụ si. Igwe ga na-agba ọfala ihe dịka afọ atọ ọbụla. Ọfala bụ emume igwe na-eme n’ime afọ olenaole ọbụla n’ime oge ọ bụ igwe, iji me ka ọnọdụ ya dịka igwe na-adị ire ma na-enwekwa ugwu.
Igwe merụọ ala
Ọ bụrụ na Igwe daa iwu, a ga-achụtu ya site n’ịbụ Igwe obodo. Ndị ọ bụ ọrụ ha ikwuputa gwa ọhanaeze iwu Igwe dara bụ ndị Ichie. Ha ga-akpọpụta ya n’ihu ọha, n’obi ezumezu dịka e si me oge e chiri ya igwe, ebe ahụ ka a ga-ekwu ihe o mere; ndị obodo eleba ya anya. Ọ bụrụ na e ji maka ihe ndị ahụ chụtuo ya, ha ga-amalite usoro, nhọpụta na ichi igwe ọzọ dịka iwu obodo si dị.
Igwe na-eyi uwe mwụda a na-akpọ uwe isi agụ maọbụ uwe isi enyi. Igwe na-eyi ákà n’olu ma n’aka. Ọ na-eji mpi enyi, na-ejikwa nza, na alọ.
Ọfọdụ ọrụ Igwe n’obodo gụnyere:
*Ichekwawa omenaala na ọdịnaala obodo.
*Ikpe ikpe n’obodo
* Igwe na-anọchi anya ndị obodo ya na mba.